Shakr: Mepụta nke gị Business Videos Online Iji zingtụnanya ndebiri | Martech Zone
Obi dị m ezigbo ụtọ na ọganihu na vidiyo na afọ ndị na-adịbeghị anya. Azụmaahịa ọ bụla nwere ohere ịdekọ vidiyo maka ụlọ ọrụ ha, mana ọ dịghị mfe. Ewezuga ogo vidiyo, ọkụ na ọdịyo, enwere ọrụ nrụpụta nke na-agwụ ike ma ọ bụ dị oke ọnụ. Enwere m mmasị n'ịme vidiyo, mana na-agagharị na ịde blọgụ ma ọ bụ pọdkastị n'ihi na ọ dị mfe karị. Ka ndị ahịa anyị wee nwee ihe ịga nke ọma, anyị enyerela ha aka ịmepụta ụlọ ọrụ ka ha nwee ike ịwụ elu n'ihu igwefoto ma pịa ndekọ.
Ọ bụghị onye ọ bụla nwere okomoko nke otu vidiyo ịdekọ, ndekọ, na nhazi vidiyo site na ncha. Ọ bụrụ na ị nwetara ego maka video edezi, saịtị dị ka Videohive dị oke mma maka ịgagharị na ịchọta vidiyo iji rụọ ọrụ gị.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị maara nke ọma na ndekọ vidiyo mana vidiyo gị enweghị naanị aka okike nke na-eme vidiyo ka ọ dị ịtụnanya? Nke ahụ bụ azịza ya Shakr ewuola. Ha ejikọtala vidiyo dị ịtụnanya maka azụmahịa gị:
Chọta vidiyo ịchọrọ iji - ị nwere ike igwu ya n'ozuzu ya:
Na mgbe emeghe ha mfe ọrụ interface ebe ị pụrụ ịdọrọ na dobe gị videos ma ọ bụ ihe oyiyi ozugbo n'ime Mpaghara. Ọ dịghị mkpa maka ọ bụla dị elu edezi, ikwu n'ụzọ, ma ọ bụ ọbụna typography… ọ bụ ihe niile preset n'ihi na ị na mbupụ ihe ịtụnanya video.
Na-agaghị akwụ ụgwọ maka gị video ruo mgbe i nwere ike ịhụchalụ ya na ọ bụ entirety… a n'ezie oké atụmatụ nke n'elu ikpo okwu.
Debanye maka Akaụntụ Shakr Free
Tags: Vidio Ahịashakrmkpokọta vidiyonchịkọta vidiovideo ihe atụvideo ndebiri
Mee 6, 2016 na 4: 30 AM
Doug, ahụrụ m nghọta n'anya nke i mere banyere Shakr dị ukwuu maka ndị nwere ike ịnweta eserese, mana chọrọ imetụ ihe okike iji mee vidiyo dị egwu. Na Shakr, anyị na-akwado ụlọ ọrụ ihe nkiri na ọtụtụ ihe okike vidiyo na ahịa. Mụ onwe m na-ejikarị Screenflow, Vee maka iPhone na ndị ọzọ. Shakr nwere obodo karịrị 1,550 ndị na-edebanye aha ha n'akwụkwọ, ọtụtụ n'ime ha arụ ọrụ maka nnukwu ụdị dị ka Nike, na-eme atụmatụ vidiyo ha maka ndị ọrụ Shakr iji mee vidiyo dị egwu site na ijikọta eserese dị ugbu a na vidiyo vidiyo.